Ny iPhone 8 dia ho kely kokoa nefa miaraka amin'ny bateria Plus | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | iPhone X, About us
Ny bateria dia iray amin'ireo lafiny ilaina indrindra amin'ny finday avo lenta ankehitriny ary mbola iray amin'ireo singa nivoatra faran'izay kely tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny orinasa dia manandrana manery ny habaka kely indrindra ao amin'ny fitaovany mba hamenoana ny bateria lehibe indrindra ary Miaraka amin'ny iPhone 8 vaovao, Apple dia tsy maintsy manao dantelina bobbin satria raha voamarina ny tsaho dia ho kely kokoa noho ny ankehitriny ny smartphone, na dia hitandrina ny haben'ny efijery ihany aza izy. Na izany aza, toa nahita fomba fampidirana ny bateria mitovy amin'ilay iPhone 7 Plus amin'ny fitaovana iray mitovy habe amin'ny iPhone 7 izy.
Eny tokoa, noho ny zava-misy fa ny zana-kazo amin'ny iPhone 8 manaraka dia hahena hatramin'ny farany, ny haben'ny maodely 5,5-inch dia hitovy amin'ny an'ny iPhone 7 amin'izao fotoana izao, izay 4,7 santimetatra fotsiny ny efijery. Midika izany fa kely kokoa ny toerana ho an'ny singa, ary anisan'ireny ny bateria. Ahoana ny fomba ahazoan'ny Apple bateria 2.700 XNUMX mAh hifanaraka amin'ny fitaovana mitovy habe aminy? Manova ny fomba fametrahana ireo singa anatiny ao anaty telefaona. Apple dia hifindra amin'ny fandaminana "mifatotra" amin'ireo singa ao aminy, hany ka ny 1/3 amin'ny tampon'ny smartphone dia tsy misy afa-tsy 1/6, ary mamela toerana bebe kokoa ho an'ny bateria.
Ahoana ny fomba hampihenana ny habaka iasan'ny singa? Mampiasà faritra maromaro. Izay napetraka ao anaty sosona tokana dia azo tapahina roa raha zaraintsika roa. Amin'izany no ahafahantsika mampiasa batterie "L" manana fahaiza-manao avo kokoa. Raha ampiantsika amin'izany fa ny efijery OLED dia hahomby kokoa noho ny LCD ankehitriny, ary koa honohono fa ny iPhone 8 dia hanana famerenam-bola haingana sy fampidirana induction., toa ny bateria dia ho lasa teboka iray hikarakara an'i Apple amin'ny iPhone manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone X » Ny iPhone 8 dia ho kely kokoa nefa miaraka amin'ny baterian'ny Plus
Manaraka dia hoy izy:
Eny, tokony ho tamin'ny ora! Mihabe izy ireo ary inona no antony? Raha 90% ny mpampiasa no aleony bateria betsaka noho ny mahia ... raha mandefa atody i Apple.
Ny zavatra manaraka dia ny tsy tadiavin'izy ireo amin'ny fahatsiarovana, fa mihabe ny lanjan'ny sary ary voalavo miaraka amin'ny fahatsiarovana izy ireo. Gaga aho fa nesorin'izy ireo ilay maodely 16Gb xD
Ale, salama maraina.
Mamaly ny Manaraka
Apple dia mandefa doka iPhone 7 Plus vaovao roa mifantoka amin'ny maody sary